Mhuno Kubaya Zvinoreva MuBhaibheriChii icho Bhaibheri rinoti - Zvinoreva Zvemubhaibheri
zvinotora nguva yakareba sei kuti iphone ibhadhare
sei yangu app chitoro isiri kushanda
icloud gadziridza yako apple id
gadzirisa yakaputsika iphone skrini
sei YouTube isingashande pafoni yangu
Mhino kuboora zvinoreva muBhaibheri?.
Bhaibheri rinotii nezvekuboora?
Kuboora chitadzo. Bhaibheri haritauri zvakawanda nezve kuboora. Munguva dzeBhaibheri zvaive zvakajairika kupfeka mhete nemhete dzemhino. Mutendi wega wega anogona kusarudza zvinoenderana nehana yake kuti oboora here kana kuti kwete.
Mutendi anogona kuboora here?
Kuboora chitadzo here? . Bhaibheri harina mirau yakajeka pamusoro pekuboora, saka inyaya yehana. Kana iwe uchida kuboora, tanga wabvunza mibvunzo mishoma.
Sei ndichida kuzviita? Icho chinangwa chakakosha sekuita. Usabayiwa nekuda kwezvikonzero zvisiri izvo, sekumukira. Mwari vanofarira moyo wako kupfuura chitarisiko chako - 1 Sameri 16: 7
Zvinogamuchirwa munharaunda yangu here? Kumwe kuboora kunogamuchirwa kupfuura vamwe mune dzimwe nzanga. Kana kwaunogara mhando yekuboora yaunoda kuita ichienderana nezvinhu zvisiri izvo, kunge zvikwata kana masekete, zvirinani kuti usazviite, kuti usape humbowo hwakaipa -VaRoma 14:16
Une hukama hwechitendero here? Kumwe kuboora kunoitwa sechimwe chetsika dzezvimwe zvitendero. Mhando iyi yekuboora ingaite seisingakuvadzi asi ine njodzi uye inotsamwisa Mwari
Chii chichava mhedzisiro? Kubaya iburi risingaperi mumuviri. Funga nezveramangwana. Mumakore gumi, makumi maviri, makumi matatu, zvicharamba zvakanaka here? Iko kune imwe nzvimbo iyo inotapukirwa nyore nyore? Ichave iri kune imwe nzvimbo inoonekwa zvakanyanya, izvo zvinogona kuita kuti zviome kutsvaga basa?
Hana yangu inotendera here? Kana hana yako isingatenderi, usazviita. Zvirinani kuve nerunyararo nehana -VaRoma 14: 22-23
Testamente Itsva haitaure nezve kuboora. Testamente Yekare inotaura nezvemhando nhatu dzekuboora:
Zvekushongedza - vakadzi vaipfeka mhete munzeve dzavo uye nezvishongo pamhino kuti vazvishongedze. Vamwe varume vakapfekawo mhete, zvinoenderana netsika yavo -Rwiyo 1:10
Nechihedheni tsika - vanhu vepedyo veIsrael vakazvicheka uye vakaita maburi mumuviri nekuda kwevakafa uye kuti vanamate vamwari vavo venhema -Revhitiko 19:28.
Kuva muranda - maererano neMutemo waMosesi, muranda wese wemuIsrael anofanira kusunungurwa mushure memakore manomwe. Asi kana iye muranda achida kuramba ari muranda, nzeve yake yaizofanira kuboorwa mumusuwo watenzi wake uye aizove muranda kweupenyu hwake hwese -Dhuteronomi 15: 16-17.
Mhando yekuboora iyo inoshorwa zviri pachena mubhaibheri kuri kuboora nekuda kwezvikonzero zvechitendero chechihedheni, nekuti chiito chekunamata zvidhori. Mutendi haafanire kuboora sechikamu chetsika yeimwe chitendero. Izvi zvakaipa.
Bhaibheri harishori kuboora kuitira kuzvishongedza . Kuzvishongedza nezvishongo chaive chiratidzo chemufaro. Zvakangozova zvisizvo kana vanhu vaine hanya nechitarisiko chavo pane kuteerera Mwari. Mitemo yehuranda haishande kune edu mamiriro.
Ndakatobaya kare. Ndoita sei?
Kana iwe wakabaya asi uchinzwa kuti Mwari aive asiriye, tendeuka uye kumbira ruregerero kuna Mwari. Kana uchikwanisa, bvisa kuboora. Buri richagara ipapo asi usazvidya moyo. Mwari vanogara vachiregerera avo vanotendeuka (1 Johane 1: 9). Kana ukatendeuka, wakasununguka pakutongwa.
Imwe yezvinyorwa zvekutanga zve kuboora mhuno iri kuMiddle East, kuda Makore 4000 apfuura . Iko kuboora mhuno kunowanikwawo muBhaibheri, kunyanya munaGenesi weBhaibheri (24: 22), apo patinoverenga kuti Abhurahama akapa hoop yegoridhe kuboora mhuno (Shanf) kumukadzi wemangwana wemwanakomana wake.
Kunyangwe paine zvekare matanho mune dzimwe tsika, senge iyo Berbers eAfrica uye maBedouins eMiddle East , avo vanoramba vachishandisa nhasi. Mutsika yeBedouin, kuboora mhuno kunoratidza hupfumi hwemhuri.
Iko kuboora mhuno kunoonekwawo mu Tsika yechiHindu , vanoisa kuboora mhino kuruboshwe fossa voibatanidza, kuburikidza neketani, kusvika kuboora munzeve.
Mutsika yedu, kuboora mhino kwakaonekwa pakati pe hippies uyo akaenda kuIndia panguva yemakumi matanhatu. Munguva yemakumi manomwe, kuboora mhuno kwakagamuchirwa na punks sechiratidzo chekumukira.
Mune ino posvo, isu tichataura nezvenhoroondo yekuboora mhino, nekuti zvinoitwa, kubvira riinhi, uye zvimwe zvinoda kuziva.
Mamwe madzinza aimboisa kuboora mhino sechikamu chemusiyano wemadzinza avo, sezvo tsika yekuboorwa mhuno yakatoburwa yatove nemakore anopfuura 4000, kusanganisira tsika dzevaKirisitu nemaHindu.
Vanhu vaiisa kuboora mhino nekuda kwechinamato uye nezvekunakisa, asi mazuva ano, kune vechidiki vazhinji kuisa kuboora mhuno kunoreva kupandukira, uye kuboora mhuno zvinoreva kuramba kana nzira yekupokana nemitemo nemitemo yenzanga.Zvinorevei kuboora mhuno ?.
Zvinoreva kubaya mhino:
Kubaya mhino mubhaibheri:
Zvinorehwa nekuboora mhino neBhaibheri zvinonyanya kutaura nezvekudanana kwemurume kumukadzi, kunoonekwa apo Isaac akapa Rebeca mhete yekuisa pamhino dzake, zvinova iko Kuboora kwemhino.
Mhino kuboora muchiHinduism:
Pakutanga, kuboora mhino kwaibatanidzwa nengano dzekare dzeParvathi, mwanasikana weHimalaya, uye mwarikadzi wekuroora uye akaiswa sechiratidzo chemagariro uye runako.
Parizvino, mukadzi wemhino akabaya mazuva asati aroora. Zvisinei, tsika yekuboora mhuno mumukadzi ichiri kuchengetwa. Pazuva remuchato, murume anobvisa muroora anobaya wemhino sechikamu chemhemberero yemuchato, uye izvi zvinobva zvava chikamu chechiratidzo chikuru chemuchato.
Imwe yekutenda kwekuboora mhino:
Kune vechiHindu vakaratidza kuti zvichienderana nenzvimbo yekuboora mumhino, kana kuboora kwakaiswa kuruboshwe fossa izvi zvakakurudzira kusimudzira kubereka muvakadzi, zvisinei, nhasi kuboora mhuno hakungogadzirwi mumadzimai nekuti ndizvo zvakangonaka mumurume sekumukadzi uye kuboora mhuno chiratidzo chemafashoni.
Uye newe? Une kuboora mhuno here?
Kana iwe wakafarira chinyorwa ichi, tiudze zviitiko zvako nezvekubaya mhuno kana kumwe kuboora kwaunotakura. Tinogona zvakare kupindura mibvunzo nezve maitiro ekupfeka kuboora uye nevamwe!
Nhenga Zvinoreva Mubhaibheri - Rudo Uye Dziviriro
Zvinoreva Maparera MuBhaibheri
Chii Chinoreva Izvo Peacock MuBhaibheri?